एउटा नेपालीको रगत पिउने अर्को नेपाली | चितवन पोष्ट दैनिक
एउटा नेपालीको रगत पिउने अर्को नेपाली
२०७० आश्विन १७, बिहीबार ०२:१३ गते
के कसम खाए पत्याउन तयार छन् पाठक ? त्यही कसम खान यो कलम तयार छ । यो मुलुकका एक नेपालीले अर्को नेपालीको घुमाउरो पाराले रगत पिएको छ । मासु लुछ्न र हड्डी चपाउनचाहिँ बाँकी छ, त्यो काम कहिलेदेखि गर्छन्; थाहा छैन । तर, यतिबेला एउटा सक्ने नेपालीले नसक्ने नेपालीको रगत गज्जबले चुसेको छ, हाकाहाकी चुसेको छ अर्थात् लाजै पचाएर आफ्नो मानव परिचय मेटाएरै चुसेको छ । रगत चुसेको एक वा दुई उदाहरणहरु होइन, हजार उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ । तीमध्ये केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
उदाहरण नम्बर एक ः
उपचार पाउनु मानवअधिकार हो । सित्तैंमा उपचार पाउनुपर्छ । मानवअधिकार पूर्ण रुपले यदि पालना गर्ने, गराउने हो भने बिरामीले औषधि सित्तैंमा पाउनुपर्छ र त्यसको साथमा उपचार पनि निःशुल्क पाउनुपर्छ । लौ भैगो, मनका गरिबहरुले चलाएको सरकारले औषधि र उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकेन, शुल्क लियो । शुल्क लिनुलाई अपराध नमान्ने हो भने पनि उपचारमा गोलमाल नगर्नु पर्ने हो, गरियो । उपचारमा लापर्बाही भएको प्रमाणितै भएर चिकित्सकहरुले बिरामीका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिएका थुप्रै प्रमाण भेटिए भने ४५ रूपैयाँ पर्ने औषधिलाई स्वयं डाक्टरले नै चार हजार रूपैयाँ लिएको देखियो । केही दिनअघि भन्ताना थरका एक डाक्टरले चितवनको भरतपुरमा यो कुकर्म गरेका थिए । यो सीधै एक नेपालीले अर्को नेपालीको रगत चुसेको उदाहरण हो ।
उदाहरण नम्बर दुई ः
यतिबेलाका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्मा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीसहितको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले होटल–होटलमा गएर भान्छासहित खाद्यान्नको अवस्था अनुसन्धान गर्दा होटल व्यवसायीले खानै नहुने, खाँदा रोगले थलिने खालको खाना सोझा, निमुखा नेपालीलाई खुवाएर पैसा असुलेको भेटे । पहिलो पटक भेटेकाले होला कडा कानुनी कार्बाही नगरी चेतावनी दिएर सडेगलेको र बासी भात बेच्नेहरुलाई छाडियो । सायद, नेपालमा यसरी ग्राहकहरुको अन्यायपूर्ण ढङ्गले रगत चुस्नेहरुलाई कडा कानुनी सजाय दिने प्रावधान नभएर होला, बासी भात बेच्ने पापीहरु उम्किए । यदि यही अवस्था अमेरिकामा हुँदो हो त ती व्यवसायीलाई जेल सजाय हुन्थ्यो, साथमा होटल चलाउने अनुमति पत्रसमेत खारेज गरिन्थ्यो । अमेरिकामा लागू गरिएको उपभोक्ता ऐनमा यदि खानेकुरा बेच्नेले अखाद्य खानेकुरा बेचेको खण्डमा र उपभोक्ता बिरामी परेको अवस्थामा उपभोक्तालाई ठूलो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ भने व्यापारीले खानेकुरा बेच्ने अनुमति पत्र कहिल्यै पनि दोस्रो पटक पाउँदैन । अमेरिकामा उपभोक्तालाई कानुनले नै न्याय गरेको छ भने नेपालमा त्यस्ता आफू नेपाली भैकन अर्को सहोदर नेपालीको रगत चुस्नेलाई कानुनी कार्बाही गरिँदैन । अन्यायमा पर्ने परेको प¥यै, रगत चुस्ने अपराधी उम्केको उम्क्यै ।
उदाहरण नम्बर तीन ः
ताजा सूचनाअनुसार बजेट भएर पनि सडक डिभिजन कार्यालय चितवन भरतपुरले भत्किएका र ठूलाठूला खाडल बनेर ठूलै दुर्घटना हुने अवस्थामा पुगेका चितवनका तमाम बिग्रिएका बाटाहरु बनाउने चासो देखाएको छैन । भर्खरै सरूवा भएर आएका नयाँ डिभिजन प्रमुखले कागज मिलाइमिलाई रकम हाम गर्ने योजना गरिरहेको सूचना बाहिर चुहिनु चितवन जिल्लावासीहरुको नाकै काटिनु हो । यो अवस्थालाई यसअघिका प्रमुखहरुले सरकारी बजेटका नाममा अप्रत्यक्ष रुपमा गरेको भ्रष्टाचारलाई सँगै गाँसेर हेर्दा सडकका हाकिमहरु नेपाल सरकारले तलबभत्तासहित विभिन्न खाले सुविधा दिँदादिँदै पनि घुमाउरो पाराले नेपाली जनताको रगत चुस्छन् भन्न सकिन्छ । प्रमाणका लागि मुगलिङदेखि लोथरसम्मका फुटेका, फाटेका, प्वाल परेका हेर्दै रिँगटा लाग्ने किसिमका बाटाहरुलाई लिन सकिन्छ ।
उदाहरण नम्बर चार ः
फलानो मान्छे राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हो । उसको जागिर छैन, अन्य पेसा र व्यवसाय केही छैन । उसको काम सिर्फ राजनीतिक गफ चुट्नु हो । पाँच–सात वर्षअघि ऊ एक खिल्ली चुरोटसमेत किनेर सल्काउन सक्दैनथ्यो । कमिजको कलरमा मयल टल्किएको हुन्थ्यो । जुत्ता र चप्पलको अवस्था बयान गरी साध्ये छैन । पुरानो साइकल, च्यातिएको कमिज, दुईरङ्गी तुना हालिएको चप्पल, झुस्स दाह्रीजुँघा, ठुस्स गन्हाउने शरीर लिएर यताउता भौँतारिने दैनिकी भएको उसको आर्थिक अवस्था आज करोडौँको छ । हिजोआज गलामा सुनको सिक्री, हातका औँलाहरुमा सुनका औँठी, नयाँनयाँ कपडा, स्वास्नी र छोराछोरीको भौतिक सुविधा प्रयोगमा अत्यधिक वृद्धि । सम्पूर्ण रुपले बेरोजगार राजनीतिक कार्यकर्ताको यो अवस्थाले के भन्छ ? उसले राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग गरेर धन थुपारेको छ । यो तरिकाले धन थुपार्दा एकातिर राज्यसञ्चालन प्रक्रिया अवरूद्ध हुन पुगेको छ भने मेहनत गरेर खानेहरु जहिलेसुकै तल पर्ने र यसरी काम नगरी खानेहरु जहिलेसुकै अघि बढ्ने स्थिति रहन्छ । यो स्थितिलाई भन्न सकिन्छ, एक चतुर नेपालीले थुप्रैथुप्रै सोझा नेपालीको घुमाउरो पाराले रगत चुसेको अवस्था ।
उदाहरण नम्बर पाँच ः
कालोपत्रे सडक निर्माणका नाममा चुसिएको रगत । नेपालमा मात्रै होइन, संसारका थुप्रै मुलुकमा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएका छन् । सडक बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, सम्पूर्ण रुपले । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सडक निर्माण गर्नका लागि जनतासँग पैसा माग्ने नियम छैन, चलन छैन र कुनै नामको कानुन पनि निर्माण गरिएको छैन । तर, घोर विडम्बना ! नेपालमा कालोपत्रे सडक निर्माणको नाममा उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर त्यसमार्फत जनतासँग पैसा मागिन्छ । लटरपटर तरिकाले कालोपत्रे गरिन्छ । लटरपटर तरिका अपनाएर बनाइएको सडक बढीमा दुई वर्ष टिक्छ । दुई वर्षपछि भ्वाङ पर्न सुरू गर्छ । सडक कुरुप हुन्छ । सवारीसाधन चल्न नसक्ने हुन्छ । दुर्घटनासमेत निम्तिन्छ । त्यसपछि फेरि पुरानो चक्र घुमाइन्छ । उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ । लाखौँलाख उठाइन्छ । फेरि दुई वर्षे सडक बनाइन्छ । फेरि सडक भ्वाङ पारिन्छ र फेरि–फेरि पैसा मागिन्छ । नक्कली पिचरोड बनाइरहने जनतासँग पैसा मागिरहने । मागेको माग्यै गरिरहने । एक पटक होइन, दुई पटक होइन– जिन्दगीभरि बाँच्न मुस्किल हुने किसिमले निचोरेको निचो¥यै गरिरहने, अप्रत्यक्ष रुपले रगत चुसिरहने ।
उदाहरण नम्बर ६ ः
विद्युत् प्राधिकरणको रगत चुसाइ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनतालाई विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । तर, लोडसेडिङको मारमा समेत पारेकै छ । महिनाभरि बिजुली बाले वा नबाले पनि न्यूनतम रकम तोकेको छ । मानवअधिकारका दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने हो भने जति बिजुली खपत गरिएको हुन्छ, त्यति मात्रै पैसा तिरिन्छ । तर, नेपालमा बिजुली प्रयोग गरे गर, नगरे पनि पैसाचाहिँ तिर्नैपर्छ भन्ने नियम राखिएको छ । यो सरासर जनताप्रति गरिएको अत्याचार हो, शोषण हो र रगत चुसाइ हो । अर्को अत्याचार अझै डरलाग्दो छ । विद्युत् प्राधिकरणले मिटर जाँचेर उठेको रकम सात दिनभित्र तिर्न गए ३ प्रतिशत छूट दिन्छ, तर उसले तोकेको समयभित्र जनताले रकम तिर्न सकेन भने जरिवाना तिराउँछ, २५ प्रतिशत । बाफ रे बाफ ! यस्तो अत्याचार दुनियाँको कुनै मुलुकमा होला ? पुरस्कार दिने तीन रूपैयाँ, सजाय दिने २५ रूपैयाँको ? यो रगत चुसाइ हो कि होइन ? पुरस्कार ३ रूपैयाँ र सजाय ६ रूपैयाँसम्म गरेको भए ए हो त नि, कंगाल बुद्धिवाला मान्छेहरुले चलाएको सरकारको निर्णय यस्तै हुन्छ भन्नु । कताको ३ रूपैयाँ, कताको २५ रूपैयाँ । यस्तो त राक्षसले चलाएको सरकारमा पनि हुँदैन । मान्छेले चलाएको सरकार र मान्छे बस्ने देशमा यस्तो अत्याचार त हुनै सक्दैन । जनतालाई बिजुली दिए पनि पैसा तिर्न पर्ने, नदिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने ! हावाहुरी, पानी, भुइँचालो र चट्याङ परेर बिजुली अवरूद्ध होस् वा ट्रान्सफर्मर चेन्ज वा यताउता सार्ने प्रक्रियामा बिजुली अवरूद्ध हुँदा जनताले पाएको दुःख–कष्टको चाहिँ कुनै हिसाब नहुने । तोकिएको समयमा पैसा तिर्न नसक्दा चाहिँ २५ प्रतिशत रकम जरिवाना ठोक्ने, त्यति गर्दा पनि पैसा तिर्न नआए बिजुलीको लाइनै काटेर राक्षसी व्यवहार देखाउने, विद्युत् प्राधिकरणको यो व्यवहारले के भन्छ ? जनताको रगत चुसेको अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन ? कठै बिचरा ! विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको के दोष ? यिनलाई माथिकाले जे अह्रायो, त्यही गर्ने हुन् । यिनको काम त जनताको ज्यानबाट चुसेर भरिएका पैसारुपी रगतका ग्यालेनहरु काठमाडौँतिर पु¥याउने मात्रै न हो !
साँच्चै हो, कमजोर नेपालीहरु चुसिएका छन् । कतै व्यक्तिले चुसेको छ त कतै समूह बनाएर चुस्ने काम गरिएको छ । एक नेपालीले अर्को नेपालीको रगत चुस्न मौका ढुकेर बसेको अवस्था बुझेर सरकारले त्यो खालको अवस्था अन्त्य गर्न प्रयास गर्नुपथ्र्यो, तर सरकार आफैँ व्यापारीको रुप धारण गरेर अघि सरेको अवस्था देखियो । संसारका कुनै पनि सरकारले आफ्नो जनतासँग व्यापार गरेर नाफा लिँदैन । तर, यो देशको सरकारले जनतासँगै व्यापार गरेर नाफा लियो । सरकारले समेत नागरिकको रगत चुस्ने काम गरेको प्रमाणै भेटियो । रगत त लामखुट्टेले पनि चुस्छ, तर नियमसंगत चुस्छ । अघाएपछि चुस्न छाड्छ तर यो देशका नागरिकहरु त यस्ता देखिए, जो अघाए पनि चुस्ने र नअघाए पनि चुस्ने । चुसिरहने, चाहे त्यसको परिणाम जेसुकै होस् ! रगत चुसाइको प्रक्रिया राणाकालबाट सुरू भयो । आजसम्म प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ । नागरिक चेतनास्तरमा जबसम्म आमूल परिवर्तन आउँदैन, सायद त्यतिबेलासम्म बलियो नेपालीले निर्धो नेपालीको रगत चुस्नेछ, कमजोरहरु चुसिने छन्, अझ निरन्तर रुपले चुसिने छन् ।